Ubuntu: Ndangariro dzeyaimbove | Kubva kuLinux
Ubuntu: Ndangariro dzezvaive rimwe zuva
Chokwadi vazhinji vanoona musoro kana munyori wenyaya ino uye vanofunga: Iri kuuya ichit kurwisa Ubuntu. Zvakanaka, kana chero mumwe wenyu akafunga nezvazvo, saka vaitei vazive kuti zvinopesana.
Vhiki rino ndakatanga kubvisa guruva maCD-ROM ekare andaive nawo mudhirowa, pandakawana ese mavhezheni eUbuntu ayo panguva yavakanditumira netsamba kuburikidza neshumiro yekufa. Chikepe.
Ndakanzwa kushuvira uye ndakafunga kuzviedza paLaptop asi zvinosuwisa, hapana vhezheni yakatanga kusvika 9.04, yaive yekupedzisira yandakagamuchira.
Ndinoyeuka nguva idzodzo. Kunyangwe ini ndaigara ndichishandisa DebianKuburitswa kwese kweUbuntu kwakandifadza nekuti panguva iyoyo, yaive yangu chete kugovera kunogara kuchiunza nhau kuvashandisi vayo, zvirinani muchikamu cheYeyecandy.
Kutanga mamwe maWallpaper, kozoita seti yemifananidzo, kozoti dingindira reGtk zvichingodaro .. Ini ndaigara ndakatarisira kuona zviziviso nenhau dzandinodzokorora kwenguva iyoyo, vakandifadza zvakanyanya.
Zvinosuruvarisa Ubuntu akatangisa kuisa "zvinhu" zvitsva nezvimwe zvisina kunyanya, kubva mushanduro yayo 10.04, nekuti kunyangwe pamberi, zvaive zvakafanana GNOME yezvose, ine yakashata poo-yevaravara Gtk theme, uye pakanga pasina chinhu chitsva pasi peketeni.
Lucid Lynx yaive yekutanga vhezheni yeUbuntu kuyedza kuswedera padhuze neOS X. Asi izvi zvino hazvisi kubva pamubvunzo. Chii chinouya mundangariro ndechekuti inokurumidza sei kusimba nguva kupfuura uye ini ndaigona kuinzwa (ingangoita pakati pechando ndichingofunga kuti hupenyu hwangu hwave kupfuura), kuyedza vhezheni 9.04 kubva muna 2009.
Ini ndinokusiira zvimwe zvabatwa, asi ini ndichakuudza zvimwe zvinhu izvo kunyangwe vasina kundishamisa, vakabata pfungwa dzangu.
Kutanga, iyo LiveCD haina kuona resolution kunze kwe1024x768 uye 800x600. Kunyangwe iwo masikirini anotaridzika zvakanaka, paLaptop iyo ine WideScreen inoratidzira, zvese zvakaratidzika zvakatambanudzwa.
Chinhu chechipiri chakandishamisa ndechekuti zvinoshamisa kuti vhezheni yeUbuntu yakaona kiredhiti kadhi neWiFi .. kuti iyo wired haina kundishamisa ini, asi iyo isina waya? WTF? Ive nekuchenjerera, yaona kadhi asi haina kunditendera kuti ndibatanidze kune chero chinhu .. asi hei, zvinopfuura zvandaitarisira.
Chinhu chechitatu chakandirova zvishoma kuona akawanda eshanduro dzekare ezvirongwa zvandinowanzo shandisa uye kuti ndikazvienzanisa neazvino uno, unogona kuona musiyano mukuru.
Izvo zvakaita kuti ndiite zvishoma nostalgic, nekuti ini ndinorangarira iyo nguva apo Vhura Hofisi 3.0 yaive inotarisirwa kuburitswa kuti ibude mune yechinyakare vhezheni 2.0, uye nhasi ndizvo LibreOffice 4.4 uyo azere nekuvandudza uye shanduko anoshandiswa pakombuta yangu.
Kune zvakare zvinhu zvinondivhundutsa, semuenzaniso nyaya ye GIMP. Makore mashanu apfuura uye chete maviri shanduro dzakaburitswa kubva ipapo (imwe yadzo kuvandudza). MuUbuntu 5 vhezheni 2 yeGIMP yakashandiswa uye nhasi tiri kungoenda ku9.04.
Izvi ndizvo zvinhu zvinoita kuti ndifungisise. GIMP yakaratidza kuve chirongwa chakanakisa chemhando yepamusoro, icho chinokwanisa kukwikwidza nevamwe vayo vezvivakwa uye zvakadaro zvinoita sekunge hachina kutarisisa kwachinoda kuti chienderere mberi kushanduka. Kushaya bhajeti kana kufarira? Uye ndezvekuti mazuva mashoma apfuura vhezheni itsva yebazi 2.8 yakavhurwa uye kutaura chokwadi, shanduko hadzisi dzekuburitsa maroketi.
Asi kudzokera kuUbuntu, ini handizive kuti nei kuyedza idzi shanduro dzekare uye kutarisa izvo zvitsva zviri uye zviri kuuya zvichimuka mumanzwiro angu akavhenganiswa. Ini ndakapika kuti handizopwanya iyi distro zvakare, asi ini handigone kubatsira kunzwa kuti Ubuntu nhasi iri kure pane zvayaimbove.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Ubuntu: Ndangariro dzezvaive rimwe zuva
9.04 ndiyo yekutanga vhezheni yandakaedza, kwete Ubuntu chete, asi Linux zvakare. Ndinoyeuka kurwa kwandakamaka kuti ndiite kuti ubudirire, uye kugutsikana nekuona kuti zvinhu zvaive zvichifamba zvakanaka. Kubva ipapo ndakaedza imwe distro, asi kuti zvive nyore ndinogara ndichipedzisira ndadzokera kuUbuntu (ndiyo iyo inondipa iwo mashoma matambudziko). Nezve kushanduka kwayakaita, kunze kwemakakatanwa ezvekuti ndeye Linux here kana kuti kwete, ndinofanira kutaura kuti ndinoda Unity, iyo pachezvangu ini ndinosarudza iyo yapfuura desktop desktop maneja kwandaisazombogona kuchinjika.
«... asi handigone kubatsira kunzwa kuti izvo zviri Ubuntu nhasi zviri kure pane zvazvaimbova.»
Ehe elav, uye ndezvekuti hupenyu hwakareba, asi hunopfuura nekukurumidza. Isuwo tinofunga kufunga, kwete pasina kufungidzira, kuti chero nguva yapfuura yaigara iri nani. Asi hazvina kudaro. Nguva dzeUbuntu 10.04 dzapera uye ikozvino dzasiyana. Hazvisi nani kana zvakanyanya kuipa.Nguva dzakagara dzakafanana, avo vakashanduka vanga vari isu vanoona zvinhu kubva kune mamwe maonero. Uye kana usinga tarise kuwanda kwekuparadzirwa kweGNU / Linux izvo zviri nani nhasi kupfuura izvo zvaive Ubuntu panguva iyoyo. Uye ndeyekuti Ubuntu yakatopfuura kare. Ubuntu ichafanirwa kurwa zvakanyanya kana ichida kutora zvekare zvekare.
Ini ndinonzwisisa kuzvidemba kwako, uye ndinonzwa chinhu chimwe chete nezvazvo, asi rangarira zvinhu zvinochinja, dzimwe nguva kwete sekuda kwaungaita, uye zvakanyanyisa kudaro apo ura hwaSekuru Maka hwakavhurika, zvakanaka, kuyeuka kuri kurarama!
xDDD Ndichiri kurangarira iyo yakashata vhezheni yeUbuntu, yaive misoro inotyisa yaive nayo, ndinoyeuka kuti pane shamwari pc, haina kuziva chinenge chero chinhu cheayo Hardware eeehhe
asi ndakaifarira nekuti yaive neiyo rustic hafu mystique, ini ndaida iyo yepasi vara
ndiyo nguva yekutanga yandakaona ubuntu yaive mune yekuratidzira mune geodeic dome (dzimba dzezvakatipoteredza dzakagadzirwa nevhu muchimiro chembichana)
Hongu, zvinofanirwa kuve kuti isu tinozvigarisa pachedu kune mashandiro ezvinhu uye isu tinogara tichiramba shanduko zvishoma
Zvakanaka, ini ndakaburitsa Ubuntu 12.04 ndichishandisa shoma cd ndikariisa pasina desktop, nekuti ini handifarire kushandiswa kweUbatana. Ipapo ini ndakaisa MATE uye ini zvechokwadi ndinoda kugadzikana kwandakawana. Ini ndinonzwa sekunge inoshanda saiyo Ubuntu 10.04 iyo yandaida zvakanyanya. Kana iwe uri mushandisi uine ruzivo, neUbuntu zviri nyore kwazvo kuita chero basa rinouya nenzira yako, chimwe chinhu icho naDebian, Arch, nezvimwe. Ini ndaisakwanisa, ini ndaigara ndichifanira kugona kuita zvimwe zvinhu izvo gare gare ne Ubuntu kana ndichigona. Ini ndinofunga zvichave nekuti nzanga yeUbuntu ichiri yakakura, ichibvumira kutsigirwa kwakawanda.
Ndingakubvunzei kuti chii nhasi? Ini ndiri archilinuxero, anopindura asinganyengerere mazwi.
Pindura kuna AncientSoul
Kunyangwe vazhinji, vazhinji vakaita zvombo zvavo zvekutanga mune kumwe kugovera, ruzhinji rwakauya kuGNU / Linux World kuburikidza neUbuntu .. Chaizvoizvo, munguva yakapfuura, yanga isiri yakaipa kugovera. Nhasi, ndinofunga atora nzira isiriyo. Iri kuita iyo GNU "Windows" ...
Kupesana newe, iwo theme yakaunzwa neshanduro dzakapfuura kuna Lucid, nekuti ini ndaivada chaizvo.
Zvandaigara ndichiramba, ndichishandisa Ubuntu, yaive nguva yekuvandudza iyo yainayo. Ini handidi kuisa sisitimu yekushandisa kubva ku0 yega yega mwedzi mitanhatu, kana kutya kuti ndikadzokorora kubva pane yapfuura vhezheni zvese zvinotyoka.
Ndine chikwereti chakawanda kuUbuntu, asi nhasi haisi kugovera kwandingakurudzira kana kushandisa.
Federico A. Valdes Toujague akadaro
@elav. Mufaro!!!. Ini ndakamboshandisa kwechinguva -pakati peDebian neDebian- Ubuntu vhezheni 6, 7, 8, 10 na 11. Na8 ndiyo yaive iyo yandaive neyakarebesa, kunyangwe pamaseva mashoma kuti ndive neVMware 1.0.8. Uye ndizvo sezvaunotaura. GNOME yaive yakajairwa. Ndinoyeuka kuti naHardy ndakaita desktop kubva pakuisirwa kwemaseva. Uye yakashanda nekirogiramu. Pane vese Ubuntus, Hardy ndiye wandaida kwazvo. Anenge mashanu maseva mumakambani evamwe vangu ndakaisa, uye achiri kushanda, pamwe neHardy. Kunyangwe bhizinesi rangu squid riri paHardy kubvira pandakaiisa mukutanga kwa5. Mamwe maseva aneLinux, ndinawo naEtch naLenny
Pindura kuna Federico A. Valdés Toujague
Iwe unondiyeuchidza nezvangu pandakatanga kushandisa Debian mushanduro 5.0. Ndichiri kurangarira dambudziko iro randaifanirwa kugadzirisa zvangu khibhodi kuburikidza neGNOME graphical interface (sezvo iyo graphical installer isina kumisikidza mamaki ebhodhi zvakanaka).
Shanduko chaiyo yandakanzwa muDebian yaive muSqueeze, sezvo ini pakupedzisira ndaive neSoftware Center uye ndakainakidzwa chaizvo.
Iye zvino ndine Wheezy uye ndiri kushandisa Iceweasel uye Uzbl panguva imwe chete.
Jaunty 8.04 yaishandiswa zvakanyanya kuchinjisa kumabhuku eKorea, yaive nani kupfuura Linpus Linux uye kubvira panguva iyoyo (2008) yakatoziva Broadcom wifi makadhi neyekutanga ane kodzero b43 mutyairi. Ubuntu Studio 12.04 (Precise) inokurudzirwa kwazvo (inoshandisa XFCE) uye iine mashoma manejimendi inochinja pasina matambudziko kuGnome Classic kuitira kuti ifanane neanozivikanwa Lucid Lynx10.04.
Iyo Ubuntu vhezheni yandaifarira uye yandaishandisa zvakanyanya yaive 10.04 uye yekupedzisira iyo yandakanyatsoshandisa yaive 11.04 uye ini handina kushandisa Ubuntu zvakare kweinopfuura vhiki.
Pindura kuna kennatj
Ini ndinobvuma .. Lucid yaive yakanakisa vhezheni yeUbuntu yandakaedza.
Ndichine Ubuntu 9.04 pachikamu chandisina kubvisa. Imwe nguva yandakaishandisa kwechinguva uye ini ndaive nostalgic nezvekuti Nautilus aive akanaka sei panguva iyoyo, zvakaipisisa ... hazvo isu tatoziva iyo nyaya ...
Ahahahhah ndinoishandisa pasina matambudziko muFedora 19 uye ini hapana kana chimwe chete chandakashaya xD
Iyo yakanakisa vhezheni yeUbuntu yaive 10.04, ndinoirangarira zvakanyanya nekuti panguva iyoyo yezvinyorwa ndakatumira makopi netsamba uye kunyangwe paine chokwadi chekuti ndakakwanisa kuikanda kuburikidza neiyo peji re ubuntu uye nekuimisa, ndaive nehunza hwekukumbira. imwe uye ndakasvika kumba, lol ini ndichiri nayo pano muunganidzwa wangu we distros ...
Jeus Israeri Perales Martinez akadaro
Iwe unowana nostalgic kana iwe ukaona ako ekare distros uye uchirangarira iyo yakanaka nguva, yangu yekutanga distro yaive backtrack 3, iyo yakangotora mahwindo angu xp uye ipapo ini ndakasvika kuUbuntu 10.04, kana Mwari chii chakaitika: '(snif snif
Pindura kuna Jeus Israel Perales Martinez
Ini ndinorangarira LInux Mint 7 Gloria yakadii WALLPAPER yakanaka yayaive nayo.
Antonio Galloso akadaro
Ichokwadi, Ubuntu iri kuderera, kwandiri, vhezheni 10.10 ndiyo yaive yakanakisa pane dzese, kubvira ipapo handina kuifarira zvachose.
Pindura kuna Antonio Galloso
Zvakanaka, dai Ubuntu hwakanga husina Kubatana, chii chingadai chakaitika? Parizvino ndaizoshandisa gnome shell, uye vanhu vanga vachitsoropodza kuti nei Ubuntu isinga gadzirise. Ini ndinofunga kuti Ubuntu yaita zvayaifanirwa kuita, ndinofunga kuti kana tikazviisa mushangu dzavo tinogona kuona kuti zvavanoita ivo havaite kuitira kutsamwisa nharaunda (kunyangwe zvinoenderana nevazhinji zvinoita), asi kuti vabudirire pazvinangwa zvavo, ndinofunga kuti zvese zvine tsananguro inonzwisisika, kana vachida kugadzira nekumhanyisa kunoitwa nemusika, ivo vanofanirwa kuzviitira vega kwete kuzvikwanisa kune zvimwe zvinhu zvekunze, zvinotozivikanwa kuti kana mumwe anorarama hupenyu achifunga nezve izvo vamwe vanofunga uye vanotaura, pakupedzisira hazvizoite chero chinhu, uye ndinofunga ndizvo zvinofungwa nevanhu nezveUbuntu.
Ndinobvumirana newe. Kutaura kwako kunoita kuti ndifunge kuti pamwe Ubuntu inoda kuve # 1, ndiko kuti, kana iwe uchitaura nezve mashandiro masisitimu anoti "Windows, Mac kana Ubuntu".
Kunyangwe vazhinji veavo vanoitevera senge inodiwa distro vanonzwa kuora moyo kana kusateererwa, sezvo yakadzokera shure kunharaunda yevashandisi kumashure kwayo; Kana tikatarisa kubva mumaonero avo ivo vari pakati pebwe uye nenzvimbo yakaoma: kuvandudza, kukura uye kuve nhamba yekutanga; kana kuenderana nevashandisi vayo vese.
Ini ndinofunga kuti vazhinji vedu hatina kutanga mukati uye isu takazoziva GNU / Linux nekuda kweUbuntu. Zvakanyanya kushata kuti izvozvi ndinonzwa kusanyumwira iyi distro, kune zvese izvo zvakataura nezvazvo kuva spyware nevamwe. Asi pachagara paine vashandisi vatsva vanozoshandisa iyi distro seyekutanga. Kune avo vasingazive dzese sarudzo, zvinoita sezvakanaka.
Iyo yandakashandisa kuvezwa ndeye 10.04, uye inomhanya chaizvo, pakutanga inotora chete zana nemakumi maviri e RAM, zvinosuwisa kuti gnome 120 chirongwa chakafa, kunyange hachina kufa
kutaura uku kwanga kusiri kuuya pano. Uye ini handikwanise kuibvisa
Kunge munhu wese, ini ndaivewo mushandisi weUbuntu. Aive akatsoropodza nezve mafambiro ebudiriro yake, uye haana kugovana irra iriko Maka!.
Yakanga iri mhosho izere, Ubuntu haisi yangu.
Ndinoyeuka kuti ndiyo yaive yekutanga yangu muLinux: ') sezvo ini ndichida iyo vhezheni yeUbuntu, yakavhura maziso angu kupasi uye yakandiita kuti ndipinde uye ndinakirwe nehupenyu sezvandinoita nhasi muLinux, ndinokutendai zvikuru Jaunty ja
Izvo zvese ndezve shanduko uye shanduko, MacOS uye Windows zvachinjawo (uye hauna zvimwe zvekugovera zvaunosarudza kubva, kunze kwekugara mushanduro dzekare)
ZVESE zvinhu zvinoshanduka, kubva kune gnome, kde, internet ... kuenda kune shangu dzaunopfeka.
Kune yakapfuura yakatsikwa-tsikwa uye kana iwe uri nostalgic unochengeta izvo zvaunoda zvakanyanya (zvirinani muLinux kupihwa kwaunogona kusarudza kushandisa xD)
Ahh .. !! chishuvo …… !! (Ndinoyeuka mharidzo yangu mu forum)
Pakutanga kwenguva (zera rangu remakomputa) pandanga ndichidzidza kushandisa win95 nekutenga macomputer magazini nema cd, yangu yekutanga linux isina kuisa / kuyedza yaive linux ppp, kozoti redhat 5.0 (pamwe nebhuku rekutanga muhomwe kune linux, izvo zvandakanga ndisinganzwisise kwazvo panguva iyoyo), ipapo mandrake 7.1, ndobva mandrake 7.2 apo zvirinani ndaikwanisa kuziva chirongwa chekumisikidza icho chakandibvunza kuti ndedzipi nharaunda, mashandisiro uye maturusi andaida kuisa kuti atorwe seakaiswa , asi pane izvi zvaida 2nd cd Izvo hazvina kuuya sechipo uye handina kana kufunga nezvekushandisa nharembozha ine 33.6kb modem, ipapo core linux1 yakasvika, kozoti winlinux2000 iyo yakaiswa pa win2 98 ine kde desktop asi haina kubata pfungwa dzangu.
Gare gare kukoreji mumwe waanoshanda naye akandipa yangu yekutanga ubuntu 5.04 (wow) kuti nematambudziko ndakaedza k6-2 400mhz ine 128 mugondohwe, kozoti ubuntu / kubuntu 7.04.
Asi kuzvarwa kwangu kwaizouya muna2009 pandakaisa Linux mint 8 Helena (zita ramai) palaptop yangu, kozoti LM9 pakombuta, kozoti LM13.
Iye zvino ini ndinongochengeta iyo ubuntu 5.04 uye 7.04 cds
Ndakatanga kushandisa Ubuntu mushure mekushandisa Mandrake naDebian. Ini ndaifara naDebian, asi Ubuntu hwaive hutsva kwandiri.
Chokwadi chinotaurirwa, iro vhezheni rakandishamisa pandakaona Mozilla Firefox kekutanga paLinux. Ini ndaisada yayo yekuvandudza system, saka ndakaishandisa se LiveCD uye hapana chimwe chinhu.
Pandakatanga kunyatsoshandisa Debian ndipo pakadzvinywa Squeeze, nekuti muGNOME yakanga isina logo yayo, yaive yatsiviwa neiyo Debian logo, kunze kwekuti yaive neiyo software yepakati iyo Ubuntu yaive nayo uye ini ndaigona kuzopedzisira ndaisa mwenje player, kunyangwe muDebian yaishandisa script yakachiisa kubva kuAdobe sute kuburikidza nescript, saka zvakapa chivimbo chekushandisa Debian.
Ini ndaishandisa pane yangu asus Eeepc700 netbook, yekutanga netbook kubuda, iyo yakauya neXandros yakashandisirwa kumenu yemifananidzo hombe yaitaridzika setoyi.
Ini ndakaisa Ubuntu ikabhururuka, yaive PC ine simba kwazvo, ndaida iro repasi repasi uye kurira kwengoma pandakatanga.
Ubuntu ihwohwo hwaive nezvakawanda zvakavanzika nekuda kweiyo African Wave iyo yainayo, yemahara inoshanda sisitimu kubva kuAfrica. gare gare vakaitsiva neye Mac maitiro ayo asingandifarire.
oh, uye kekutanga nguva pandakaona Linux, yaive Ubuntu 8 mune yekuratidzwa kweshamwari dzezvakatipoteredza vakaita Permaculture, kubva ipapo ini ndakachida ipapo.
Zvese zvinhu zvaive zvitsva kwandiri, ndanga ndisingazive kuti perculture yaive chii, kana yemahara software. Nekudaro, ini ndinobatanidza yemahara software neecology uye kugovana.
Nenzira yandisinganyore kubva paPC yangu, ndosaka ndichinyora kubva paWindows.
Ndichiri kukunzwisisa. Ubuntu pamberi payo 10.10 vhezheni yaive yakanakisa, asi ikozvino hazvisi izvo zvaive (ndosaka ndakashandisa Debian Squeeze kuti ndinzwe kubwinya kwakarasika Ubuntu).
Hwangu hwekutanga ubuntu hwaive Karmic Koala. Ini ndaida iro zita XD
Zvakanaka, mune infocenter / raibhurari yeyunivhesiti kwandinopinda, ivo vachiri neUbuntu 8.04 inomhanya Firefox 3.6 pane mamwe emakomputa avo ekushandisa kwevadzidzi (kuseka).
Nenzira, pane chero munhu anoziva kuti ndeupi mutemo weSudo wekuvandudza Gimp? Ndiri chidiki chevacheche kunyangwe mune aya marwa.
Ndakatanga neUbuntu 8.04, asi pasina kupokana iyo yakanakisa Ubuntu vhezheni yakaburitswa yaive 10.10.
Ini ndinoremekedza ubuntu, sezvo yaive yangu yekutanga yemahara software yekuparadzira uye ini ndinobvuma kuti vhezheni 8.04 uye 8.10 yaive yakanaka kwazvo, shanduro dzapashure hadzina kundishungurudza, kana kuodza moyo, ... chete kubva kunguva 11.04 kusvika parizvino, ini usafunge Kuti iwo akanaka kwazvo kugoverwa, nekuti iwo anorema, akaomarara uye haana kuumbika zvakanyanya (Mune maonero angu).
Nechikonzero chakafanana ndakachinjira kune mamwe emahara software kugoverwa uye nguva nenguva ndinoshandisa Ubuntu, asi chete nekuda kwekufunga.
Ndakatanga na6.10 ... uye iyo yandakatora chidakadaka chandinofunga yaive 7.04 sezvo yaive iyo yandakatanga kunyongana nayo nezvinhu, ini ndakaisa nekugadzirisa (izvo zvaifanirwa kuitwa neruoko) beryl + emerald, kadhi yangu network neUSB ... Kubva muna 8.04 ini ndanga ndatotanga kuyedza mamwe ma distros uye nunk ndakadzokera kuUbuntu zvachose, ndakaedza akati wandei vhezheni uye 12.04 yakabata neXFCE pane yangu laptop kwemwedzi yakati wandei, asi ini handina kumbova nazvo se "default" », Kunogara kuchiuya poindi pandinotsamwa nezve zvimwe zvinonetsa uye kusvetukira kune imwe.
Pindura kune woqer
Iyo yaive yekutanga Ubuntu vhezheni yandakaona. Ndakaiona mumusangano wangu wemakomputa uye sezvo ini ndanga ndisinganzwisise kuisa codec kuti mutengi atambe MP3, ndakadzorera Windows. Ini handisi kudada nazvo, asi kuda kuziva kwakaramba kuneni uye ndakagara mukati me10.04. Nhasi ini handina kana mbiri-mbiri - ini ndinongoshandisa Ubuntu. Uye Ubuntu inoita kunge iri nyore kwandiri izvozvi kupfuura zvayaive pakutanga.
Iniwo ndobva panguva idzodzo, vakandipa cd cd seiyi ... ndinopika kuti ndaida, kunyangwe ndaive nedambudziko neinternet (iyo nekuda kwehunhu hweColombia ndakakwanisa kugadzirisa) zvese zvaive zvakanaka.
Zvakanyanya, zvekuti pakati pematafura angu andinofarira ndinogara ndichidzokera kune yakasarudzika, ingave iri gnome 2, matte, kana chimwe chinhu chakada kufanana ne lxde mhando mapaneru kana akafanana 🙂
Ikozvino kubva kuSainzi Linux ndinonakidzwa neyakagadziriswa yezuro, nezvirongwa uye nehurongwa hunoshanda. maererano
ubuntu 10.04 yaive yangu yekutanga distro: '(sei nostalgic iyo inondipa ini
Arch Linux + KDE yekuisa danda: Nhanho-nhanho kumisikidza
Numix: Nhau yakanaka yekukuperekedza